SAWIRRO:Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray taallooyin taariikhi ah oo lagu soo nooleeyey barnaamijka Isxilqaan – Kismaayo24 News Agency
SAWIRRO:Madaxweyne Farmaajo oo xarigga ka jaray taallooyin taariikhi ah oo lagu soo nooleeyey barnaamijka Isxilqaan
by admin 19th October 2019 081
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarigga ka jaray taallooyinka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, SYL, Dhagaxtuur, Xaawo Taako iyo Axmed Gurey oo dhammaantood dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey.Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarigga ka jaray taallooyinka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, SYL, Dhagaxtuur, Xaawo Taako iyo Axmed Gurey oo dhammaantood dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda astaamahan iyo casharrada ma guurtada ah ee shacabka Soomaaliyeed ay waqti kasta kala bixi karaan sooyaalkeenna ay ku suntan yihiin midnimada iyo geesinimada.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa mid mid uga dul-istaagay taariikhda bidhaameysa ee halyeeyadan, waxa uuna Alle uga baryey dhammaantood in uu ka abaal mariyo halgankii xornimadoonka ahaa iyo in ay naftooda u hureen si dadkooda iyo dalkooduba ay xor u ahaadaan.
“Dalkeennu waxa uu leeyahay halyeeyo badan oo ay tusaale u yihiin halgameyaashan aan maanta maamuuseyno, waxaan rajaynayaa in aan wado xusno si la mid ah taalooyinka maanta halyeey kasta oo dalkeenna wanaag ku daray. Dhammaan halyeeyadii naftooda u huray xornimada dadka Soomaaliyeed waxa ay naga mudan yihiin maamuus iyo duco.”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay sii amba-qaadaan halgankii halyeeyadooda, kana miro dheliyaan hiigsigii ay naftooda u horeen oo ku saleysan midnimo, wax-wadaqabsi iyo in ay noqdaan dad iyo dal miisaankooda ku leh dunida.
“Dhammaan Halyeeyadan waxa ay ka wada shaqeynaayeen xornimada dalka, gumeysiga, quursi iyo qabjabka in uu dalkeennu ka xoroobo, sidoo kale dadkeennu ay qabyaalad ka xoroobaan, taas ayaana sabab u noqotay in aan yeelanno Qaran haybad, sharaf iyo maamuus kulahaa caalamka. “
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyey muhiimadda uu leeyahay Barnaamijka Isxilqaan oo horseeday in dib loo dhiso, laguna dayac tiro goobahan taariikhiga ah ee ku burburay dagaalladii sokeeye iyadoo kuwo kale oo haatan gabo gabo maraya, waxa uuna uga mahad-celiyey muwaadin kasta oo xooggiisa iyo xoolihiisaba geliyey dib u dhiska dalka.
Doqoni Dibir kama dharagto Barakac xoogan oo ka bilaabmay Magaalada Baladweyne.
Taliska Booliska oo xiray Askar ku sugneyd bar koontarool oo ka dambeeyay dilka Taliyihii ururka…
Sheekh Shaakir oo ka hadlay shirka galmudug iyo Ahlu-sunna ee ka furmaya Dhuusmareeb
Ahmed sudani 14th January 2018
Daawo: Ciidamada NISA ee jubbaland oo kismaayo ka bad baadiyay qaraxa noociisa lagu sheegay in uu ahaay….
Tifaftiraha K24 11th March 2017
admin 24th March 2018 24th March 2018